Announcement – The Art Garden Rohingya
Releasing Our First Anniversary Magazine
Aug 01, 2020 AGR Announcement, Video
8Releasing Our First Anniversary Magazine The Art Garden Rohingya is the first Rohingya community poetry and art platform. We publish poetry and other forms of artworks in print, online website and social media and ...
Jan 01, 2020 AGR Announcement
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အယ်ဒီတာ အကြိုက်ဆုံးကဗျာ (၅)ပုဒ် * ဒန်းရိုးရာ | ရေး- Shahida Win * ခါးသီးလွန်းတဲ့ သေခြင်းတရား(၂) | ရေး- လာလ်မိုတီ * ချမ်းငြိမ်းကြပါစေ | ရေး- မိုဟာမ္မဒ် ရှမီးမ် * အမှန်တရား | ရေး- မင်းဝန်ဇော် * ...
Top 10 Poems of November, 2019
Dec 03, 2019 AGR Announcement, POETRY
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အယ်ဒီတာအကြိုက် အ ကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ(၅)ပိုဒ် ဒုက္ခသည် ဘဝ | ရေး- Shahida Win ရိုတို့ဘဝ/ | ရေး- BM Hairu ဤတာရာ/ | ရေး - ငြိမ်းချမ်းနဂျမ်း (ရိုခရီးသည်) လမ်းမှန်အတိုိုင်း ရှေ့သိုို့ရုန်းလျှောက်/ | ရေး - Shamin&Lalmoti ရို့ မျက်ရည်ကျနေဆဲ/ | ...
Top Poems of The month October
Nov 01, 2019 AGR Announcement, POETRY
October 2019 Editors Choice Top(5) English Poems “Journey To Success/” | By Serazul Hogue “A Mmotherless Migrant/”| By Sahat@ Zia Hero Naing “ That's My Mom”| By Jahangir Alom “In Rush of Saving Life/”| ...
Oct 03, 2019 AGR Announcement, POETRY
၂၀၁၉ ခု စက်တင်ဘာလ၊ အယ်ဒီတာများ၏ ရွေးချယ်မှု "အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ ၃ ပုဒ်" ၁။ သမုဒယ/ ................... ရေးသူ..ရိုချေ ၂။ အမေ/ ....................... ရေးသူ…Ro Anamul Hassan (KyeinChaung Thar) ၃။ ရှေ့သို့လှမ်းကာ ပန်းတိုင်ရှာ .. ရေးသူ Lalmoti (3-10-2019) September, 2019 ...
Sep 15, 2019 AGR Announcement, Quotes
By Editorials မိမိတို့ရိုဟင်​ဂျာများ ကာလရှည်​​ကြာ ​တွေ့ကြုံရင်​ဆိုင်​ ခံစားဖြတ်​သန်း လာရသည့်​ လူမျိုးတုံးသတ်​ဖြတ်​မှုလူလုပ်​ကပ်​ဘေး၊ ​နေ့စဉ်​ဘဝတွင်​ ​ကြုံ​တွေ့ခံစား​နေရသည့်​မတရား အနိုင်​ကျင့်​မှုများကို မိမိတို့ရိုဟင်​ဂျာများကိုယ်​တိုင်​ စာကမ္ဗည်းမှတ်​တမ်းတင်​ထား​ရေး ဖြစ်​ပါသည်​။ စာမူဖိတ်​​ခေါ်ခြင်း ကျွနု​ပ်​တို့ The Art Garden Rohingya Page ကိုတည်​​ထောင်​ရခြင်း၏ ရည်​ရွယ်​ချက်​များမှာ - - - ကျွနု​ပ်​တို့ The Art Garden Rohingya Page တွင်​ က​ဗျာစာမူများကို ...
Sep 01, 2019 AGR Announcement, POETRY
August-2019 Editor Choice Top5English Poems The-Ocean-In-My-Dream/ By Parmin Fatima Witnessing-The-Second-Genocide/ By Mayyu Khan Premature-Repatriation/ By Pacifist Farooq A-little-Human/ By Nang Poe In-Search-of-Peace/ By BZ ...
Top 10 Poems of July 2019
Aug 01, 2019 AGR Announcement, POETRY
July-2019 Top5Editors Choice English Poem A Woman by Thida Shania The World; A Good Place To Live? by Ro BM Hairu (Taung Pyo) We, Rohingya by Arakan Thar @ ...
Top 10 Burmese and English Poems of June
Jul 03, 2019 AGR Announcement
June-2019 Top5Editors Choice English Poems (1) Seek the Night of Destiny (Lailatul Qadr) By Abu Saad (2) Three Black Days By Anamul Hassan (son of headmaster) (3) ...
Top 10 Poems of May,2019
Jun 01, 2019 AGR Announcement
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၊ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ်နှင့် အင်္ဂလိပ် ကဗျာ (၅) ပုဒ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလတွင် ကလောင်ရှင်များက The Art Garden Rohingya သို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် ကဗျာများအနက်မှ မြန်မာ ကဗျာ (၂၄)ပုဒ် နှင့် အင်္ဂလိပ်ကဗျာ (၄၇)ပုဒ်၊ စုစုပေါင်းကဗျာ (၇၁)ပုဒ် ...
May 01, 2019 AGR Announcement, POETRY
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် ရွေးချယ်ခံရသော TOP-10 ကဗျာ (၁၀) ပုဒ် စာဖတ်ပရိတ်သတ် အကြိုက် မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ် ၁။ ရိုတို့ဓလေ့ - ရေးဖွဲ့သူ- ဇာဟီးဒုလ္လာ ၂။ အိမ်အိုလေး..ေ ရေးဖွဲ့သူ- Ro Anamul Hassan ၃။ တို့နာဇီရွာလေး..ေ ရေးဖွဲ့သူ- ဇော်လွင်ထွန်း ၄။ ...
Apr 12, 2019 AGR Announcement
To poets and readers, First of all, the Art Garden Rohingya would like to provideahumble thank to all poets and readers. It’s incredible the way our webpage has been moving smoothly. Today, ...
Mar 27, 2019 AGR Announcement, POETRY
To Poets - We, The Art Garden Rohingya would like to giveaspecial thank to those poets who send poems to us. - Our aim is to provideaplatform as ...
BOSÓRI PATHRI BŌI: The Art Garden Magazine No.2 April 30, 2022